Calaamadaha Pharyngitis | Bezzia
Astaamaha xanuunka 'pharyngitis'
Tony Torres | 09/06/2021 23:55 | Cudurada
Cudurka loo yaqaan 'pharyngitis', cuna xanuun, ama qumanka? Xataa haddii ereyadan waxaa badanaa loo adeegsadaa si aan kala sooc lahayn Si loo muujiyo isla wax, runta ayaa ah in kuwani ay yihiin dhibaatooyin aad u kala duwan. Dhuunta ayaa dhaawici karta fayras ka dhashay, kaasoo sababa caabuq hareeraha qumanka, laakiin qumanka laftiisa kuma dhaco. Markay tani dhacdo, gaar ahaan qumanka ayaa waxaa sababi kara sababo kala duwan.
Laakiin marka uu jiro pharyngitis, sida saxda ah waxa dhaca ayaa ah in xiiqda ay bararsan tahay. Caabuqani wuxuu dhacaa ka dhasha infekshinka bakteeriyada. Infekshankani wuxuu keenaa caabuq daran qumanka, iyo sidoo kale dhammaan dhuunta cunaha. Cudurka loo yaqaan 'Pharyngitis' waxaa weheliya xanuun, qandho, wax liqidda oo dhib ku ah, iyo raaxo-la'aan oo inta badan socotaa illaa toddobaad.
1 Waa maxay astaamaha lagu garto cudurka loo yaqaan 'pharyngitis'
1.1 Daaweynta cudurka 'pharyngitis'
1.2 Kahortag cudurka cagaarshowga
Waa maxay astaamaha lagu garto cudurka loo yaqaan 'pharyngitis'
Waxaa la soo gudboonaaday cune xanuun cunaha ah, waa muhiim in la qaado talaabooyin ka hortag ah si looga fogaado cawaaqib xumada ka dhalan karta. Si kastaba ha noqotee, marka infekshan bakteeriya uu dhaco, waa wax aad u adag in laga hortago astaamaha inay ka soo muuqdaan xaalad kasta. Si aad u awoodid inaad ku ogaatid cudurka 'pharyngitis' ee suurtogalka ah, waxaa ugu wanaagsan inaad tagto xafiiska dhakhtarka si marka lagu daro ogaanshaha cudurka, sii koorso antibiyootiko ah oo nadiifisa cudurka.
Kuwani waa astaamaha cudurka 'pharyngitis' taasi waxay kaa caawin kartaa inaad kala soocdo dhuun xanuun mararka qaarkood ka yimaada infekshan u baahan daaweynta daroogada.
Cune xanuun: cune xanuun waa astaamaha ugu weyn uguna muuqda ee cagaarshowga. Waxaad ogaan kartaa apcadaadis xoog leh qoortaada, aagga dhexe ee hareeraha qumanka.
Qumanka oo barara: Marka barar ku dhaca xiiq-fuggu, qumanka ayaa saameyn kara oo si ba'an u barara. Waa maxay waxay ka hortagtaa wax liqidda sida caadiga ah, soo saarista xanuun xoog leh xitaa tilmaanta fudud ee liqista candhuufta.
Qandho: Infekshanku wuxuu sababi karaa qandho, iyo sidoo kale xanuun guud, murqo xanuun iyo daciifnimo. Calaamadahaasi waxay aad ugu egyihiin kuwa ifilada.
Qanjirrada qanjidhada oo barara qoorta: Qanjidhada qanjirada qoorta waxaa laga helaa daanka hoose, oo ku dhegan qoorta iyo xiiqda. Haddii infekshanku muhiim yahay, noodhadhku way barari karaan sidaas noqo mid muuqda isha qaawan.
Daaweynta cudurka 'pharyngitis'
Dariiqa kaliya ee wax ku oolka ah ee lagu daaweyn karo xanuunka loo yaqaan 'pharyngitis' waa inaad booqato dhakhtarkaaga. Waa lagama maarmaan in khabiirku uu falanqeeyo sababaha keena xanuunka 'pharyngitis', iyo sidoo kale darnaanta, si loo qoro daaweyn habboon. Sababtoo ah halista ah in aan si sax ah loo daaweyn dhibaatadan waxay u horseedi kartaa xanuunka 'pharyngitis' oo raaga. Daaweyntu waxay mari kartaa qaadashada antibiyootiko gaar ah, iyo sidoo kale xanuun joojiyayaasha.
Qaadashada dareeraha badan ayaa sidoo kale aad muhiim u ah, maadaama qandho ay u horseedi karto fuuqbax. Intaa waxaa dheer, waa in lagu daraa in dhibaatada liqitaanku ay sababi karto in maalmo yar ay adag tahay inaad qaadato wax cunto adag ah. Sidaa darteed, ka isticmaalka cuntooyinka dareeraha kulul, maraqyada aadka u nafaqada leh, casiirka dabiiciga ah ka buuxa fiitamiino iyo dabcan, biyo badan.
Nasashada waa qeyb aasaasi ah oo soo kabashada ah, Sidan oo kale habka difaaca jirka ayaa loo xoojin karaa iyadoo lala dagaallamayo cudurka. Waxa kale oo aad ka caawin kartaa cunahaaga inuu bogsado adigoo ku luqluqda biyo iyo soodhaha. Isku day inaad nasato inta aad karto, ha hadlin si aanad u sii xanaaqin cunaha una oggolaan inay si buuxda u soo kabato ka hor intaadan ku laaban hawlahaagii caadiga ahaa.
Kahortag cudurka cagaarshowga
Inaadan helin daaweynta ku habboon xaalad kasta, way heli kartaa waxay sababaan pharyngitis inay u horseedaan dhibaatooyin waaweyn sida infekshinka dhagaha ama sanbabka. Marka waa muhiim in la raaco talooyinka takhasuska leh ee ku saabsan daaweynta. Marka lagu daro qaadista talaabooyinka ka hortagga ah ee lagama maarmaanka ah, oo ay ka mid yihiin nadaafadda gacanta, ka fogaanshaha cabitaannada aadka u qabow ama qoorta looga ilaaliyo deegaanno aad u daran.
Xaaladaha badankood cudurada cunaha waa laga hortagi karaa, qaadashada taxaddarro aasaasi ah. Ka fogaanshaha dadka muujiya astaamaha cagaarshowga waa muhiim, sidaa darteed, haddii aad carruur ku haysato guriga, waa inaad hubisaa inaysan aad ugu dhowaan si looga hortago inay qaadaan cudurka. Isticmaalka maaskaro, iyo sidoo kale nadaafadda gacmaha ayaa kaa caawin doonta inaad ka ilaaliso qoyskaaga tan iyo fayrasyada kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Cudurada » Astaamaha xanuunka 'pharyngitis'